Dasaatiirtii Soomaaliya iyo isbadalladii ku dhacay – Kalfadhi
June 17, 2018 Kalfadhi
Dastuur waa qaanuunka ama heshiiska ugu sareeya ee xadida haykalada aasaasiga ah ee dawladi leedahay iyo nidaamka xukunka ee xeer u ah shacab ama bulsho nidaam wadaag ah, nidaamkaasi ha ahaado mid jamhuuri ah am mid boqortooyo ah waxaa kale oo uu dastuurku xadidaa sawirka xukuumadda sida jamhuuriyad barlamaani ah ama mid raysal wasaare leh. Dastuurku waashayga qofkasta xaqiisa u damaanad qaada.
Waxaan is bar bardhig kusameyn doonaa guud ahaan Dasaatiirtii dalkaWaxaana xusid mudan in dalka ay soomartay 4-Dastuur.
Abukaate Daahir Adan Cali waa sharci yaqaan waxa uu og yahay sheekooyin badan oo ku saabsan Dasaatiirtii ina soomartay waxaan wax ka weydiiynay qeybo kamid ah Dastuuradii dalka.
Dastuurkii 1960, waa dastuurkii ugu horeeyay ee aay Soomaaliya yeelato kadib xurriyadii. Dastuurkan waxaa lagu meelmariyay afti-dadwayne 20 Juun ee 1961-kii, wuxuuna saldhig u yahay dhammaan dhaxalka qaannuun ee Soomaaliya, ( the origin of Somali’s legal legacy) qodobada dastuurkaan waxay ka kooban yihiin 105 qoddob.
waxaana qeybaha astaamihiisi kamid ahaa:
Dasturkaan waxaa laallay kacaankii milatariga ahaa ee dalka ka curtay 21 October 1969.
Dasruurkii 1979, Dastuurkaan waxaa loogu talagalay in lagu xalaaleyo shuruucdii la soo saaray muddadii 10-ka sannadood aheyd ee wadanku ahaa bilaa dastuurka, ujeeddada ugu wayn ee dastuurkaan loo sameeyay waxay aheyd in uu adeego madaxdii kacaanka oo xilligaas wadanka ka talineysay, maxaa kamid ahaa astaamihii waa kan mar kale AbukaateDaahir.
Dhoor qoddob ayaa ugu xiiso badan waxaana kamid ahaa Mabaadi’da gundhiga u ah jamhuuriyadda oo ay kamid tahay nidaamka hanti wadaaga oo ay hogaaminnayso dabaqadda xoogsatada ahi sida lagu sheegay dastuurka.
Dasturkaan wuxuu qeexayaa in Jamhuuriyadda Soomaaliya ay tahay mid qaadatay nidaam ku dhisan hal xisbi oo qura iyo in aan la ogoleyn xisbi kale.
Dastuurkii 1990, Dastuurkaan waxaa lagu daabacay nuqulkiisii ugu horreyay faafinta Rasmiga ah ee Jamhuuriyadda dimuquraadiga Soomaaliya 12 october 1990-kii si afti dadwayne loogu qaado hase ahaatee burburkii ayaa dhacay iyada oo aan la hirgelin aftidii dadwaynaha.
Dastuurkan oo ka kooban 119 qoddob waxaa loogu talagay in dib’uhagaajin lagu sameeyo hannankii dowladnimo ee uu wadanku ku jiray muddadii ciidanku hogaaminayay iyo in wadanka loo sameeyo dastuur dimuquraadi ah oo ay ka muuqdaan dhammaaan tiirarka dimuquraaddiyada sida; damaanad qaadka xuquuqda iyo xuriyaadka aasaasiga ah, kala baxsanaanta awoodaha dowladda, iyo abuuridda nidaam xisbiyo badan,
Astaamaha ugu muhimsan ee dastuurkan waxaa kamid ah kuwan hoos ku qoran:
Axddiyadii KMG, Burburkii kadib waxaa la sameeyay isku dayo kala gedisan oo lagu doonnayo dib’udhiska qarannimadii burburtay. Sanadku markuu ahaa 2000 ayaa magaalada Carta ee wadanka Jabuuti lagu guddonsaday Axdiqarameedka KMG. Sidoo kale 2004 ayaa la qaatay axdiga federaalka ee KMG ,mid walba oo laba Axdigaasi kamid ah wuxuu ahaa heshiis bulsho oo loogu talagalay in la isticmaalo muddo kooban oo ah muddada wadanku kujiro KMG.
Labada axdiqarameed ma aheyn dasaatiir laakin waxay ahaayeen heshiisyo bulsho oo ku dhaqankoodu u dhigmo dastuur mid walba mudda uu dhaqangalka ahaa.
Abukate Daahir oo sharciyaqaan ah ayaa siquman u qeexaya Dastuurka xiligaan dalka u degsan astaamihiisa iyo waxyaabaha uu kaga badalan yahay kuwii hore.
Dastuurka federaalka KMG ee 1/Aug 2012, Kadib muddo 12 sannadood ah oo lagu jiray marxalad KMG ah laga soo bilaabo 2000 ilaa 2012, Soomaaliya waxay ka baxday marxaladii KMG aheyd, waxaan si kumeel gaar ah loo ansixiyay Dastuur KMG ah 1/Aug 2012, dastuurkan wuxuu ka kooban yahay 143 qoddob iyo 15 Cutub.
Astaamaha ugu muhimsan ee dastuurkan waxaa kamid ah kuwan hoos ku xusan:
Wuxuu qeexayaa in Soomaaliya ay qaadatay nidaam federaal ah oo leh laba heer dowladeed
Wuxuu dhiira-gelinnayaa xuquuqda aadanaha, talinta sharciga, ku dhaqanka Xeerarka Caalamiga ah, iyo Sarreynta Sharciga
Wuxuu damaanadqaadayaa xuquuqda iyo xurriyaadka aasaasiga ah.
Wuxuu asteynayaa baahinta awoodaha heerarka dowladaha iyo kuwa kale oo aad ka arki karto Dastuurka hadda inoodegsan
WQ; Xasan Maxamed Aweys